कहाँ छ चिया मन्त्रालय ? – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsकहाँ छ चिया मन्त्रालय ?
May 22, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, डुवर्स 0
Tea pluckers at New Doors tea garden which is open and under Andrew yule in doors west Bengal. Express photo by Partha Paul.08.11.15
डुवर्स, 22 मई 2017
डुवर्समा स्थापित चियाबारीहरूको स्थिति दैनन्दिन गहिरिँदै गइरहेको छ। जसको कारण चियाबारीमा आश्रित मानिसहरू निरुपायजस्ता देखिनथालेका छन्। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन असुरक्षित हुँदै गएपछि चिन्तित देखिन थालेका छन्। बुनियादी आवश्यक्ता कसरी पूरा गर्नुपर्ने भन्ने गम्भीर सङ्कट देखापर्न थालेको छ। अहिले स्थितिमा मालिकवर्ग चियाबारीको स्थितिमा सुधार ल्याउने कुराप्रति उदासीन नै देखिन्छ। यस्तोमा सरकारको श्रममन्त्रालय वा विभाग चियासङ्कटलाई लिएर मौन नै देखिन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालय सङ्कटलाई लिएर मालिकवर्गमाथि दबाव बनाउन अघि आउनपर्छ।
मन्त्री निर्मला सीतारमणले केहीचोटि प्रभावित डुवर्सको भ्रमण गरिन्। सङ्कट समाधान गर्न सरकारले उचित पदक्षेप लिने आश्वासन दिइन्। प्रधानमन्त्री मोदीले डुवर्सकै भूमिमा आएर चिया मन्त्रालय बनाउने कुरो सार्वजनिक गरेका थिए। यसबारे केन्द्रले चासो देखाएको छैन। चियावाला प्रधानमन्त्रीले चिया मन्त्रालय गठनको कुरो गर्दा ताली बजाउनेहरू अहिले चिन्तित र असन्तुष्ट देखिन्छन्। राज्यसरकारले पनि चिया सङ्कटलाई लिएर ठोस काम गर्ने भरोसा दिलाउँदै आएको छ। चियाबारीको वर्तमान स्थितिले राज्यसरकारको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठ्दैछ।
बन्द चियाबारी खोलिएको छैन। सञ्चालित चियाबारीहरू बन्द हुने क्रम जारी नै छ। राज्यको टी डिरेक्टोरेटले के गर्दैछ थाहा पत्तो छैन। राज्यले केही वर्ष अघि चियासङ्कटलाई राहत दिलाउन ‘ प्याकेज’ घोषणा गरेको खबर प्रकाशमा आयो तर त्यो कहाँ दिइयो कसैलाई थाहा छैन।
यस्तोमा श्रमिकहरू भने लाचारजस्ता देखिन्छन्। श्रमिक सङ्गठनहरू पनि उस्तै उस्तै लाचार राजनैतिक दलको पक्षधर भएरनै सीमित रहिआएको देखिन्छ।